Labo wariye oo u xirnaa tebinta warar la xiriira xasuuqii Muslimiinta Rohingya oo la sii daayey… – Hagaag.com
Labo wariye oo u xirnaa tebinta warar la xiriira xasuuqii Muslimiinta Rohingya oo la sii daayey…
Posted on 7 Maajo 2019 by Admin in World // 0 Comments
Madaxweynaha dalka Myanmar Win Myint ayaa shaaca ka qaaday in dalkiisu uu sii daayay in ka badan 6500 maxbuus, kuwaas oo ay ku jiraan wariyayaashii Reuters ee kala ahaa Wa Lone (33-jir) iyo Kyaw Soe Oo (29-jir).
Labadan wariye ayaa xirnaa 512 maalmood iyagoo lagu eedeeyay tabinta warar la xiriira xasuuqii Muslimiinta Rohingya ay u geysteen ciidanka qaranka Myanmar dhammaadkii sannadka 2017-ka.
Sannadkii hore ayay maxkamadi ku xukuntay labadan wariye min 7 sano oo xarig ah, waxaana lagu helay dambi ah in ay dusiyeen sir dowladeed.
Waxay marwalba ku adkeysanayeen in aysan wax dambi ah geysan marka laga reebo in ay shaqadooda wariyenimo gudanayeen oo ay tabiyeen warar la xiriira xasuuqii Muslimiinta Rohingya.
Booliska ayaa shirqool casuumaad been ah kusoo xero geliyay labadan wariye markii la qabanayay sannadkii 2017-ka, waxaana ay sheegeen in boolisku ku casuumeen qado hotel ka dhaceysay oo ay warqado “sir dowladeed” u dhiibeen.
Si kastaba xarigga labadan wariye ayaa si weyn looga cambaareeyay caalamka, waxaana ay taasi sababtay in ay hoos u dhacdo sumcadda hogaamiyaha Aung San Suu Kyi oo iyadu caddaalad darro dalkeeda ka cabaneysay muddo sannado ah, caalamkuna ku garab istaagay.